Tuesday May 30, 2017 - 22:05:34 in Somali News by Super Admin
Warar laga helayo ilo lagu kalsoonaan karo ayaa tibaaxaya in Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Saalax Axmed Jaamac uu ku guda jiro sidii uu magaca wasaarada ugu dhoofin lahaa dad marka uu ka qeyb galayo shirarka caalamiga ah.
Wasiirka oo maanta u safraya magaalada Nairobi ee dalka Kenya si ugu sii baxo halkaasi uuna magaalada Geneva ee dalka Switzerland ugu qeyb gala kulan weynaha hay’ada shaqada adduunka ee ILO ayaa waxaa uu wafdigiisa kusoo daray shaqsi lagu magacaabo Caydaruus Saalax Yuusuf oo aan ka shaqeyn Wasaarada Shaqada.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa waxaa ay xaqiijiyeen in Caydaruus Saalax Yusuf uunan ka shaqeynin wasaarada shaqada iyo arrimaha bulshada balse uu yahay shaqaale ka shaqeeya Wasaarada Arrimaha Dibadda, waxaana uu qaabilsan yahay qeybta arkiiviyada ama keydinta documentiyada.
Wasiir Saalax Axmed Jaamac ayaa ku wadaya Caydaruus in uu yahay gacan yaraha wasiirka sida ku cad qoraal ay wasaarada shaqada u dirtay hay’adda ILO. Arrintan ayaa ah mid uu Wasiir Saalax Axmed kaga been sheegayo shaqada uu rasmiyan Caydaruus hayo ayadoo gacanyaraha wasiirka ee sida rasmiga ah loo yaqaano uu yahay nin lagu magacaabo Cabdiraxiin.
Baaris ay sameysay Waagacusub ayaa waxaa soo baxaya in Caydaruus Saalax Yusuf uu ka mid ahaa dadkii sida weyn ugu ol-oleynaayay Saalax Axmed Jaamac in uu xildhibaan noqdo, ayna tahay safarkan loo wadayo Caydaruus mid loogu abaal gudayo abaalkii Wasiir Saalax Axmed Jaamac loo galay.
Wasiir Saalax Axmed Jaamac ayaa sidoo kale la sheegay in ay isku heyb yihiin Caydaruus Saalax Yusuf ayna kasoo wada jeedaan magaalada Ceri Gaabo ee gobolada waqooyi galbeed Soomaaliya.
Wadi taanka Caydaruus Saalax ee loo wadayo magaalada Geneva si uu ugu qeyb galo shir caalami ah asaga oo matalaya wasaarad uunan si rasmi ah uga shaqeynin, halkii laga wadi lahaa shaqaalaha kale ee wasaarada shaqada ee aqoonta u leh waxyaabaha shirka looga hadlaayo ayaa ku abuurtay dareen xoog leh shaqaalaha wasaarada shaqada iyo arrimaha bulshada.
Falkan uu ku lug yeeshay Wasiir Saalax Axmed Jaamac ayaa muujinaya heerka uu marayo maamul xumida & nin jecleysi ka dhex jira wasaarada shaqada.
[Daawo] Wasiirka Isaaq ugu gobsan oo Siilaanyo iyo kooxdiisa ceebeeyay
Daawo Wasiirka Isaaq ugu gobsan oo Siilaanyo iyo kooxdiisa ceebaayay Full Article